LTP VOHEMAR: Fampitaovana sy fanolorana mari-panofanana – METFP
LTP VOHEMAR: Fampitaovana sy fanolorana mari-panofanana
Novatsiana fitaovam-panofanana ny LTP Vohemar. Manaraka ny fanatanterahana ny Velirano faha 4 dia ny fampiroborobona ny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana arak’Asa indrindra fa ny any amin’ny faritra. Natao ihany ho fampiharana ny politikan’ny Ministera hoy Ramatoa Minisitry ny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana arak’Asa VAVITSARA Rahantanirina Gabriella.
Ezahana arak’izay azo hatao ny mampanara-penitra ny ivon-toeram-panofanana manerana ny Nosy mba ahafahan’ ireo mpiofana manao fampiaharana. Fototra ahafahana manantenteraka ny « Adéquation Formation Emploi ».
Ankoatr’izany fampitaovana izany dia notolorana mari-panofanana ihany koa ireo tanora miisa 84 avy amin’ny kaominina Vohemar. Fanofanana amin’ny asa voasokajy (FPQ), toy ny « Installation de panneaux solaires sy ny fiompiana akoho gasy nohatsaraina.
» Olo-mahay raha, tsy very mandeha «
©️SCOM METFP /Octobre 2021